Grenadier माछा - एक गहिरो-पानी माछा कि प्रशान्त र एटलान्टिक महासागर को पानी बसोबास। यसलाई सजिलै digestible बोसो स्रोत र कुन grenadier 16.5% मा प्रोटिनको पूर्ण छ। Grenadier यस्तो tryptophan, methionine र lysine रूपमा आवश्यक एमिनो एसिड को एक उच्च सामग्री छ। यसबाहेक, यस माछा मासु भिटामिन सी, बी भिटामिन र पीपी समावेश गर्छ, यो आयोडिन, सल्फर, मैंगनीज, जस्ता र तामा मा धनी छ, सामान्य चयापचय लागि मानव जीव गर्न आवश्यक हो। यसको शरीर मा grenadier माछा विभिन्न ट्रेस तत्व को केंद्रित को एक अधिकता - क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, फ्लोरिन, क्याल्सियम, फलाम, फस्फोरस र म्याग्नेसियम।
माछा मासु grenadier एक pinkish tinge संग सेतो, slabovoloknistuyu छ तर एकदम बाक्लो, अलिकति पानी जस्तो स्थिरता। पकाउने विधि बिना राम्रो स्वाद छ, यो, कान र फिलर therefrom तयार उसिनेर गर्न सकिन्छ, तला। मासु grenadier जनावरहरूको मासु भन्दा धेरै छिटो र सजिलो पचा लिया जान्छ। उदाहरणका लागि, मासु को पाचन लागि मानव शरीर पाँच घण्टा भन्दा बढी आवश्यक हुनेछ, र भद्दा फाइबर, grenadier माछा समावेश छैन, दुबला समुद्र डाइजेस्ट गर्न - केवल दुई वा तीन।
हाम्रो स्टोर को समतल मा grenadier माछा फारम मा जमाई र स्थिर fillets प्रवेश गर्छ। तपाईं यो स्वादिष्ट माछा को कुनै पनि पकवान तयार गर्ने निर्णय भने, स्थिर fillets grenadier, साथै अन्य कुनै पनि मासु, चरम यस्तो तातो पानी वा माइक्रोवेव रूपमा defrost तरिकाहरू सहनुहुन्न भन्ने सम्झना। मासु Thawing स्वाभाविक ठाउँ लिन गर्नुपर्छ, टी। ई मा कोठा तापमान।
Grenadier माछा: व्यञ्जनहरु
यसको असामान्य नाम र उपस्थिति भए तापनि grenadier माछा त्यहाँ एकदम धेरै छ, अन्य समुद्र माछा र माछा grenadier पकाउन तरिकाहरू जस्तै बाटो तयार पारे।
1 हरियो मटर संग सलाद र मासु grenadier माछा।
माछा पट्टिका grenadier, खुशबूदार जरा र मसाले को 200 ग्राम, हरियो मटर को 100 ग्राम क्यान्ड, एक गाजर, वनस्पति तेल को 10 ग्राम र धेरै सिरका,2टमाटर, डिल: तपाईं को आवश्यकता हुनेछ सलाद तयार। यसबाहेक, सस को तयारी को लागि आवश्यक: एक कच्चा अण्डाको पहेंलो भाग, घिउ, चिनी, नुन को 60 ग्राम, सिरका को 3%, तर 50 G।
माछा fillets नुनीन पानी मा खाना पकाउन र शांत गर्न अनुमति दिन्छ। Chilled fillets र गाजर, घन मा कटौती तिनीहरूलाई थप्न हरियो मटर, एक घण्टा फ्रिज मा वनस्पति तेल र सिरका, स्थान को एक मिश्रण खन्याउन। यसैबीच, चटनी, नुन, सिरका र चीनी, अण्डाको पहेंलो भाग यो दल्नु बनाउन पूर्व-shredded घिउ थप्न। त्यसपछि एक पानी स्नान मा खट्टा क्रीम सस (स्थिर रहनेबारे जोडदार) को स्थिरता ल्याउन। चटनी cooled भएपछि, यो मा फिटेको थप्नुहोस्।
फ्रिज मा एक घण्टा रहन पछि, माछा सस खन्याउन हलचल र एक राम्रो सलाद कचौरा र garnish मा डिल र टमाटर को स्लाइस को एक sprig संग राखे।
सस 2. भुटेर grenadier।
यसलाई बनाउनको लागि, तपाईंलाई आवश्यक पट्टिका grenadier को 500 ग्राम, लसुन को 3-4 लौंग, हरियो प्याज, एक कागति, वनस्पति तेल, सोया र तिल सस।
पट्टिका धुन र सानो टुक्रा मा कटौती। लसुन बोक्रा र अंगीठी, एक कागति को रस संग मिश्रण सोया सस र तिल एक चमचा थप्नुहोस्। तलना धुवाँ वनस्पति तेल सम्म तातो मा मासु (15-20 सेकेन्ड प्रत्येक पक्ष), ताजा जडीबुटी एक प्लेट र garnish मा राख्नु र चटनी खन्याउन। एक पक्ष पकवान रूपमा सिद्ध चामल छ।
कुटपिट मा 3. grenadier fillets।
पट्टिका, सानो टुक्रा2सेमी बाक्लो मा crosswise कटौती र कागति को रस संग छिडकना धोए। खट्टा क्रीम, पीठो र अन्डा को एक मोटी कुटपिट तयार, मसला थप्न। माछा को टुक्रा, त्यसपछि ब्रेडक्रंब मा, सुरुमा कुटपिट मा डूबा। तेल को एक ठूलो रकम मा मध्यम गर्मी मा हलचल तलना।
चकलेट muffins - छिटो र स्वादिष्ट
ब्रोकोली र माछा संग Casserole: खाना पकाउन र कसरी विस्तार गर्न कसरी
दुनिया मा ऊंची रूख - विशाल Hyperion
पहुँचमा: यो के हो? यसलाई खान?
विवाह लागि छुटकारा - कसरी सस्तो बेच्न छैन?
विन्डोज फोन मा खेल स्थापना गर्न कसरी विवरण
Intex पूल लागि पानी हीटर: विवरण र एक संक्षिप्त विवरण
मस्कोबाट सप्ताहांतका लागि सेन्ट पिस्टबर्गको भ्रमण